Jonathan Goodluck oo ku guulaystay doorshadii Nigeria - BBC News Somali
Jonathan Goodluck oo ku guulaystay doorshadii Nigeria
19 Abriil 2011
Image caption Jonathan Goodluck, madaxweynaha Nigeria
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Nigeria, Prof Jeg waxa uu xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in natiijooyinkii codbixintii madaxweynannimada ee dalka Nigeria uu si cad oo qeexan uu ugu guulaystay Jonathan Goodluck.
Jonathan Goodluck waxa uu helay iaa 23 milyan oo cod, halka ninka la tartamayey oo ahaa genral Buhari uu helay ilaa 12 milyan oo cod. Jonathan Goodluck waxa uu sanadahan danbe ahaa madaxweynaha dalkaasi, ka dib markii uu geeriyoodey madaxweynihii hore, Yara Adwa oo uu u ahaan jirey madaxweyne-ku-xigeen. Waana nin kiristaan ah oo ka soo jeeda koonfurta dalkaasi.
Khudba uu ka jeediyey telifishannada dalkaasi ayuu Jonathan Goodluck waxa uu ku sheegay in doorashadani tusaale u tahay habka dimoqoraadinnimo ee dala Nigeria, waxanu ugu baaqay dadweynaha reer Nigeria inay dhawraan midnnimada qaranka iyo sharciga.
Musharraxii la tartamayey Jonathan Goodluk oo ahaa General Buhari, ahna nin muslim ah oo ka soo jeeda gobollada waqooyi, horena uga noqday madaxweyne milateri dalka Nigeria, ayaa haatan sheegay in aanu ku qancayn natiijooyinkani iyo inuu rumaysan yahay in lagu shubtay. Waxana la rumaysan yahay in ay dhici karto inuu ka qaato racfaan.
Waxa kale oo gobollo ka tirsan dalka Nigeria ka dhacay buuq iyo rabshado geystey dil iyo khasaare, gaar ahaanna gobollada waqooyi oo ka cadhysan natiijada doorashada. Waxa la gubey hanti, guryo iyo xafiisyada xisbiga Jonathan Goodluck. Waxa kale oo la weeraray dadkii u codeeyey ee taargeerayey Jonathan Goodluck.